Home » Short Story » နွေဥသြ (အပိုင်း-၁)
ဇာတ်သိမ်းရင် မင်းတားနဲ့ မင်းတမီးကို ညားပေးနော်
ဟုတ်ကဲ့ပါ စာရွက်နဲ့ရေးထားတာ ကွန်ပျူတာနဲ့စာပြန်စီတာမပြီးသေးလို့ပါ
မင်းနိုင်က ဘာပြောလို့ မင်းနိုင်ကို စောင်းပြောကြတာလဲဟင်?
မင်းနိုင်ကဘာမှမပြောဘူး သူ့ဘာသာနေတာ ကောင်မလေးတွေက တမင်သွားစနေတာ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ အများဆိုတော့ အနိုင်ကျင့်ကြတာ
မိန်းခေးဆိုတာ အဖွဲ့လိုက်ဆို ဘုမှမကြောက်တော့ဘူး . . .
ဟုတ်ပ တစ်ယောက်တည်းဆို ကုတ်လို့ (ငယ်ငယ်ကပြောပါတယ်)
ဆရာ မင်းလူ ရေးတဲ့ ဝတ္ထုတွေလိုပဲ
သူတို့နဲ့တော့ အကွာကြီးပါ ဗျာ မယှဉ်ရဲပါဘူး